Ukujimisa inanazi inkomo ukuze ibe tight ukwenza inkomo ibe mnandi
Ake sicacise ayikho inkomo e-tight nengekho tight kodwa yi pelvic floor muscle eba strong noma eba weak, hayi inkomo. Kunabantu abasebenzisa ama-despirin, Colgate toothpaste, snuff (crushed tobacco), u-ginger, Knorrox cubes enkomeni, cha ungakwenzi lokho, kakulungile. Lezinto zizoshintsha i-PH yenkomo, bese uthola izifo kalula, lama products awakhelwe ukufakwa enkomeni.
Geza ngamanzi abandayo
Indlela elula yokwenza inkomo ibe tight ukuyigeza ngamanzi abandayo, ufake ne salt encane. Uma usandla kubeletha inkomo isanomthungo uboyigeza ngawo amanzi abandayo ne-salt. Abanye bafaka ne lemon emanzin okugeza inkomo. Lokho kuzokwenza inkomo ibe itight.
Bilisa u-ginger efakwe u-ju uwuphuze uzowubona umahluko kwinkomo. Okuhle nge-ginger ukuthi yelapha ivikele izifo eziningi.
Curcuma Comosa lesihlala usisebenzisa sinjalo, usifaka emanzini ashisayo bese uyagovoza, i-steam singeke kwinkomo lokho kwenza inkomo ibe tight, okuhle ukuthi akhona namaphilisi alesihlahla atholakala ema-pharmacy abhalwe u- Curcuma Comosa
Kegel Exercises (Pelvic floor exercises) iyona ndlela engiyincomayo yokuqinisa inkomo, le exercise ungayenza ngisho uhleli nesithandwa sakho, usemsebenzeni, ebus stop, esitimeleni noma ulaphi. Kumele ujimise i-muscle yenkomo, abanye benza iphutha bajimise izinqa, noma isisu. Uyithola-kanjani ke imuscle okumele uyiqinise? Ake uzame ukuchama bese ubamba umchamo, Leyo muscle obamba ngayo umchamo yi-PC (Pelvic floor muslcle) okumele uyijimise. Enye indlela yokuthola le-muscle ngukufaka umunwe kwinkomo bese ubamba umunwe ngama-muscle enkomo. Uma usuqeqesha le muscle, kumele uyibambe imizuzwana engu-5 (seconds) bese uyayidedela imizuzwana engu-5 (seconds) futhi, uma usukwaz ukubamba i-muscle imizuzwana engu-5 uzonyusa isikhathi kube imizuzwana engu-10, yenza lokhu cishe kathathu ngosuku kube yi-set ka-10 times.
Ungawubambi ke umchamo uma uchama lokho kungenza ube nezinkinga zesinya. Uma unenkinga nale exercise xhumana ne-gynecologist izokusiza. I-Kegel iyakusiza ekutheni ukwaz ukubamba umchamo kodwa, ungayenzi uma uphiswe ngumchamo noma uzwa ukuthi umchamo useduze. Ungasheshi uphonse ithawula uma ungayiboni imiphumela, kwabanye kuthatha ngaphezu kwenyanga ukubona imiphumela. I-muscle Lena oyi qeqeshayo ilena e-contractayo uma usuchama ocansini, leyo muscle izokwenza umuntu wakho aku-enjoye kakhulu, izokwaz ukut imbambe tight, uzokwazi ukusebenzisa yona ukubamba itotozi uma sewenza ucansie.
Inkomo ine-PH ephakathi kuka 3.8 kanye no 4.5 lokho okusho ukuthi inkomo ine-acid, leyo acid ivikela inkomo kumagciwane. Ziningi ezinto ezishintsha i-PH lokho okwenza inkomo igcine isinuka noma isithola izifo, kubalulekile ukuthi inkomo yakho ihlale ikulelizinga le-PH. Inkomo iyanuka kabi uma inama bacterias noma inezifo ze-STD, Akhona ama-tools adayisa ezitolo okuhlola i-PH yenkomo. Ezinye zezinkinga ezidalwa yinkinga yePH kwinkomo: ukuncinza, i-discharge, ukunuka kabi kwenkomo.
Izandla ezingena kwinkomo kumele zihlale zihlanzekile, uma kukhona okusebenzisayo okufakwa enkomeni kumele wenze isiqiniseko sokuthi kuhlanzekile. Ukuba no partner abaningi nokwenza ucansie olungaphephile kuyaba nomthelela wenkomo enephunga. Emva kokwenza ucansie iya endlini encane ufike uchame. Uma inkomo yakho inephunga bonana nodokotela emva kokuzama lokhu okulandelayo. Ukuqeda iphunga lenanazi, udinga ukudla okukhipha ukuncola emzimbeni, ukudla okulandelayo kuzoliqeda iphunga kwinanazi.
Ama-fruits afana ne-celery, red grapes, pineapple, oranges, sweet lime azohlanza ingaphakathi lakho, liphele iphunga lenanazi. Zijwayeze ukuphuza i-juice enamala-fruits abaliwe. Futhi kuthiwa uma udla lama fruits inkomo yakho izonambitheka njengawo uma likukhotha ibabazi. Ukubhema ukuphuza kungalinyusa izinga lokunuka kwenkomo. Idla kakhulu ama-fruits Kanye nama-vegetables, wehlise kakhulu ezintweni ezinamafutha, wehlise kutshwala, wehlise kwi coffee, wehlise kushukela, wehlise kusawoti.
Nompilo Mpiloo 2020-10-01 15:25:18
Kuchazan ukuphupha kugula ingane ekhaya kin kodwa kungasiyona eyakh
sindisiwe mabaxana 2020-10-20 01:45:55
Ngyabonga ngath kuza kahle ngalan
Slondile Myeni 2020-10-25 22:24:30
Engathi leli page lishaya khona angibonge
cebile nzuza 2020-11-01 20:22:12
ngiyabonga kuza kahle impela
Lulue Ncube 2020-11-17 13:35:33
Ngyathanda nam la ekhaya
Gugu gwala 2020-11-20 21:25:41
Ngicela ukubuza uma uphupha amafruit or umuntu wakini akuphuphe ukhulelwe
Monica mathebula 2020-11-23 13:26:22
Ngne khinga yenanaza iyaluma noma ngaya clinic ithula kwemalanga iphindze iCale
Asiphamandla Kulani 2020-12-02 10:57:24
Ngingaphuzani emva kwe mascarriege ukuthi ngicoce isibeletho nenkomo Yami?